Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSubu & Mala
Le Penthouse enelanga iseThamel, eKathmandu. Amagumbi okulala ama-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi egcweleyo, indawo yokuhlala kunye neeterraces ezi-2. Kufuphi kubomi basebusuku, iindawo zokutyela, ii-pubs/ibhari, ivenkile kunye nokuzonwabisa. Indawo yokuhlala yangoku ngaphakathi kwesakhiwo esihle seNeo Classical/esitsha esidityanisiweyo. Ukukhanya okwaneleyo, indawo eninzi, indawo efanelekileyo kwaye ibandakanya bonke ubutofotofo bale mihla. Ixabiso elikhulu lemali, lilungele izibini, abahlobo kunye neentsapho. Sinezindlu ezigqwesileyo ezili-9 eThamel kwaAirbnb. Sithumele umyalezo ukuba awuyifumani imihla kule.
Mna nomfazi wam sasinenjongo yokuba iApartment yethu enamagumbi amabini okulala ibe yindawo apho sinokuchitha ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo. Yadityaniswa ngothando ukuze ivumelane nezinto esizithandayo namhlanje. Umthi wokwenyani wawusetyenziselwa umgangatho kwaye safakela umgangatho ukuya kwisilingi umnyango otyibilikayo/iifestile ukuze sithathe ithuba lokukhanya kunye nokuzoba kwilanga elaneleyo.
Silindele ukuba iindwendwe ziyonwabele ngokwenene indawo. Yitya isidlo sakusasa kwindawo enelanga ye-4th okanye ungcamle isidlo sasemini esikhulu kwitafile enqabileyo kodwa eyomeleleyo okanye wonwabele isidlo sangokuhlwa kunye neziselo kunye nabahlobo / usapho kwindawo yokuhlala/yokutyela. Konke kunokwenzeka.
Indawo yethu ayiyonxalenye yehotele okanye indawo eneenkonzo. Silula, indlu enefenitshala epheleleyo kwaye siyarenta. Ke ngoko asikhange sicinezele yonke into ekwandiseni inani lamagumbi ukwandisa ingeniso. Apha kwiflethi yethu ufumana indawo eninzi-impahla exabisekileyo kwiThamel emxinwa! Endaweni yokubhukisha amagumbi amabini ehotele, ungachitha ixesha elisemgangathweni kwindawo yethu eyi-1300 sq. ft. Kodwa qaphela ukuba ngenxa yokuba sisithili sabakhenkethi, kuya kubakho ukugcwala kwendlela kunye nengxolo yendawo.
Isakhiwo sangoku (esakhiwe ngo-2010), i-neo-classical kunye ne-Newari fusion, yakhiwe kwindawo enye kunye nomoya ofanayo woyilo wendlu endala eyagunyaziswa ngutatomkhulu kwiminyaka eli-100 eyadlulayo.
Esi sakhiwo siyilwe ligcisa eliphezulu laseNepal, uMnu. Arun Pant kwaye lakhiwe yinkampani yodidi luka-'A'. Yenzelwe ukuba imelane neenyikima ezinkulu. Esi sakhiwo akhange sibe nomonakalo emva kwenyikima ka-Aprili 2015. Uhlolisiso olwenziwa ziinjineli zezakhiwo lwabonisa ukuba akukho monakalo kwaphela.
Umgangatho ongaphantsi kwesi sakhiwo uneevenkile ezine ezilungiselela abakhenkethi. Unokuthenga iitshali zeCashmere, umsebenzi wezandla waseKashmiri kunye nobuchule bentsimbi. Ndiqinisekile ukuba baya kukunika isaphulelo esihle ukuba ukhankanya ukuba uhlala kumgangatho ophezulu ☺
Umgangatho wokuqala yindlu yearhente yokuhamba, umgangatho wesibini ikwayindlu enamagumbi amabini okulala adweliswe kwi-Airbnb njenge "Soundproof 2BHK Thamel Apartment." Umgangatho wesithathu yenye iApartment ye-2BHK edweliswe kwa-Airbnb njenge "Neo Modern 2BHK Thamel Apartment". Indawo yokuhlala ikwimigangatho yesi-4 neye-5 yesakhiwo. Ayikho eminye imigangatho ngaphezulu komgangatho we-5 wendlu.
Igumbi lokulala elinomgangatho wesine elinomoya opholileyo linebhedi ephindwe kabini yokumkanikazi, iwadilophu egcweleyo, umgangatho wokwenyani wamaplanga kunye negumbi lokuhlambela elineensuite enamanzi ashushu abandayo/abandayo, isimbo sasentshona iWC, isitshizi esibanjwa ngesandla sendlu yangasese kwakunye negiza yombane.
Igumbi lokulala elinomgangatho we-5 eline-air conditioning liqhagamshelwe ngezinyuko ezincinci zangaphakathi ezenziwe ngamaplanga. Inebhedi yobukhulu eyenziwe ngokwezifiso, itafile yokufunda, iwadilophu, umgangatho womthi wokwenyani igumbi lokuhlambela elidityanisiweyo elinamanzi ashushu/abandayo, isimbo sasentshona iWC kunye nesitshizi esiphathwa ngesandla sendlu yangasese. Igumbi lokulala linebhanki epheleleyo yeefestile ze-aluminium ezityibilikayo ezijonge empuma nasezantsi. Kwanele ukuthi, kufana nendlwane yokhozi enokukhanya kwelanga kunye nokukhanya kwendalo okuhamba imini yonke. Yindawo efanelekileyo yokudibanisa usuku lonke kunye ne-paperback thriller.
Izinyuko ezimbalwa emva kokungena kwiflethi zikukhokelela ekhitshini elivulekileyo elinendawo entle yesidlo sakusasa. Ikhitshi inazo zonke izinto eziluncedo ozifunayo ukuze ulungiselele izidlo ezininzi. Yenziwe ngobuchule ukuze ukwazi ukupheka, ukugcina kunye nokucoca ngexesha elincinci kangangoko.
• I-4-ring hob yegesi
• Iisilinda zerhasi (zibekwe kwingqameko ngaphandle kwekhitshi)
• I-Induction Cooker
• I-Exhaust Hood
• Iikhabhathi zokugcina
• Cinezela isiFrentshi
• Ingqayi yaManzi kunye neDipenser
• Iiglasi zeWayini
• Iiglasi zebhiya
• IiMugs zekofu
• Isithako kunye nezikhongozeli zokutya
• Isifudumezi/isixhobo sokuhambisa amanzi ashushu
Idibane nekhitshi yeyona ndawo siyithandayo-iNdawo yokuHlala kunye neDining (i-air-conditioned) kulapho sithanda ukuchitha ixesha lethu elininzi ngelixa sisendlwini. Kukho iibhanki ezinkulu ezimbini zomgangatho ukuya kwisilingi yokutyibilika umnyango wealuminium / iifestile emazantsi nasentshona ezivumela ukukhanya kunye nokukhanya kwelanga okuninzi. Iifestile nazo zinokugqunyelelwa ngokupheleleyo ngokuqengqeleka iimfama ze-bamboo. Umgangatho wonke nawo wenziwa ngamaplanga okwenene.
Itafile ye-rustic yokutyela kunye neebhentshi zenziwe ngepinewood endala efunyenweyo eneempawu ezininzi. Iseti yesofa yenziwe kwiisofa zakudala zeCorbusier kodwa zenziwe ekuhlaleni ngamagcisa angengawo asofa. Itafile yekofu yenziwe ngamaplanga angama-100 okwenene anqunywe ngokobukhulu. Umbhoxo weTibetan wanamhlanje ubeka indawo.
Kukho iitesi ezimbini. I-terrace yomgangatho we-4 yindawo encinci ye-terrace elungele ukuphuma kwindawo yokuHlala / yokutyela ukuphefumla. Unako ukwayama ngeengqiniba zakho eludongeni olugcinayo kwaye ujonge ubomi njengoko kusenzeka eThamel ngezantsi.
I-terrace yomgangatho we-5 inkulu kwaye ijikeleze igumbi lokulala. Kuhle kakhulu kwindibano encinci. Inika iimbono ezintle ngokubhekiselele kwiinduli zasentshona ezijikeleze intlambo kwaye unokubamba ukutshona kwelanga okukhulu phantse yonke imihla ebusika. Zombini iiteyidi zinemigangatho enethayile ye-terracotta.
Sityale imali kwiiPaneli zeSolar kunye neeBattery ezinkulu njenge-backups ukuze siqhube izinto ezininzi ngaphakathi kwindlu. Amandla okuxhasa umva anika izibane kwindawo yokuHlala/yokutyela, ikhitshi, amagumbi okulala, izinyuko zangaphakathi, iTera kunye negumbi lokuhlambela. Ikwanika amandla iWi-Fi, iTV, iSatellite TV, iDVD, iFridge kwaye phantse zonke iisokethi zamandla.
• IiPaneli zaManzi eSola kunye neTanki yokuGcina
• Iphaneli yeSola kunye noMbane oSekelwe kwiBattery
• I-32" ye-Flat Panel ye-LED TV
• I-TV yesathelayithi enazo zonke iindaba eziphambili, ezemidlalo kunye namajelo olonwabo
• Inkqubo yoMculo
• 5 MBPS iFiber Optic Wi-Fi
• Umatshini wokuhlamba weSamsung
• Ibhodi yentsimbi / yentsimbi
• Ivacuum yococa
• Impompo yoxinzelelo lwamanzi (Ukwenzela ukuba iishawari zakho kunye namanzi etephu aphume ngamandla hayi nje ukuthontsiza)
• Isisomisi seenwele kunye neZithombiso ezisisiseko
• Amacandelo okugxotha iingcongconi
4.83 · Izimvo eziyi-100
Isakhiwo sezindlu singaphakathi kwendawo yeThamel engundoqo kunye nesitrato esikhulu. Iyafikeleleka nangeteksi, yindlela ofika ngayo apha okokuqala ngomthwalo wakho. Kodwa kamva siyakukhuthaza ukuba wehle kumnyango omkhulu weThamel kwaye uhambe imizuzu embalwa ukuya kwigumbi kwaye uthathe umoya wehabhu yabakhenkethi edlamkileyo.
Phuma kwintendelezo yeApartment kwaye usembindini wentshukumo. Iivenkile ze-eclectic ezisesitalatweni, iindawo zokutyela ezininzi, iiarhente zokuhamba, iiarhente zokuhamba, iispa kunye neebhari zingaphandle kanye.
Umbuki zindwendwe ngu- Subu & Mala
Mna nomfazi wam sihlala ngaphandle kwendawo, kodwa ziyafumaneka kwifowuni, umbhalo kunye ne-imeyile. Siya kukhathalela nayiphi na imiba enokuthi ivele. Abagcini bezindlu bahlala bekhona xa kukho into oyifunayo.
USubu & Mala yi-Superhost